Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » I-Eswatini ebanjwe phakathi kweTaiwan ne China ithetha ingozi enkulu
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba Eziphulayo Eswatini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Iindaba zaseTaiwan eziQhekezayo • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Xa ubukumkani obunoxolo eAfrika buya buxinana kusenokwenzeka kubekho isizathu esibanzi. Ebukumkanini base-Eswatini inokuba ingxabano e-China eTaiwan. I-China ifuna urhulumente omtsha e-Eswatini- kwaye ngoku ingalixesha lokuba esigebenga sobukomanisi senze umlingo.
Imeko ezolileyo ngoku kwidolophu elikomkhulu lase-Eswatini iMbabane ezineevenkile ezivaliweyo nezitalato ezingenanto zinokuba kukuthula phambi kwesiphango.
Ngokutsho kwemithombo yamandla angaphandle azisa iimbumbulu kwiKomkhulu lase-Eswatini.
Ngaphandle kwabaqhankqalazi abancinci abafuna ukufumana ifuthe elingaphezulu kweli lizwe, kunokubakho amandla amakhulu asebenza imeko ngasemva. Eli gunya linokuba yiRiphabhlikhi yaBantu base China.
UWalter Mzembi, owayesakuba ngumphathiswa wezangaphandle e-Zimbabwe kwaye eqhelene ne-geopolitics e-Afrika ucinga, i-China inezizathu ezininzi zokubona uKumkani wase-Eswatini emkile.
Ayisiyongxaki yokuba i-United States yakhe enye yezona ndawo zikhulu zozakuzo emhlabeni kweli lizwe lincinci lase-Eswatini. Isizathu ngokuqinisekileyo sibandakanya iTaiwan ne China.
Owona mbuzo mkhulu inokuba yiTshayina kunye nomnqweno weli gunya lehlabathi lokunciphisa impembelelo yephondo elibalekileyo eTaiwan, ekwabizwa ngokuba yiRiphabhlikhi yase China.
Urhulumente omtsha e-Eswatini ngokuqinisekileyo uya kutshintsha angayamkeli iRiphabhlikhi yaBantu base China ngaphezulu kweRiphabhlikhi yase China, eyaziwa njenge Taiwan. I-China ingayithanda le-kwaye ibalulekile kolu gonyamelo lobukomanisi. I-Eswatini kuphela kwelizwe lase-Afrika elinobudlelwane bezopolitiko kunye neTaiwan.
Kungoko ke kungangathi kungakho ngengozi ukuba iQela lamaKomanisi lase-Eswatini namhlanje liqinisekisile ukuba iKingamakhosi, uKumkani uMswati III ubalekile kwilizwe lakhe wathi ebeseRhawutini, eMzantsi Afrika. Ukubambela Inkulumbuso yoBukumkani iyakhanyela oku.
I-King kuthiwa ishiye phakathi koqhanqalazo oluxhasa idemokhrasi olutshayela ubukumkani be-1.16 yezigidi zabantu kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Eswatini ulilungu leZizwe eziManyeneyo, iZizwe eziManyeneyo, uManyano lwe-Afrika, iMarike yesiqhelo eMpuma naseMazantsi e-Afrika, naseBotswana Umbutho woPhuhliso lwaMazantsi e-Afrika.
IPeoples Republic of China yaziwa ngokuba nefuthe elikhulu kwi-SADC. Abanye bathi uMbutho woPhuhliso lwamaZantsi e-Afrika uphulukene nokubaluleka, okucaphukisa i-China.
Urhulumente wase-China, izibonelelo zokuzibandakanya ne-Afrika zicacile. I-China isebenzise utyalo-mali lwayo e-Afrika ukufikelela kwizibonelelo zorhwebo zelizwekazi, kubandakanya ioyile, izinyithi ezixabisekileyo, kunye neeminerali ezibalulekileyo kwimveliso yeetekhnoloji ezivelayo ezinje ngeebhetri zezithuthi zombane.
I-Afrika ikwamele imarike enomtsalane yeefemu zokwakha zase China, ezijamelene nomthamo ogqithisileyo ekhaya kwaye zinomdla wokufumana iindawo ezintsha.
Nangona kunjalo, amaxesha amaninzi izibonelelo zezi projekthi azihambi ziye kubasebenzi baseAfrika ngokubanzi. Inkxaso-mali yase China kwiiprojekthi zeziseko zophuhliso zase-Afrika kaninzi iza neemfuno zokuba amazwe abolekayo akhethe abathengisi base China, nto leyo eyenza kube nzima ngakumbi kwamanye amazwe, kubandakanya i-United States, ukuba ithathe inxaxheba kwiiprojekthi zeziseko zophuhliso zase-Afrika.
I-Beijing ikwazile ukukunyusa ukuzibandakanya kwayo e-Afrika ukuba ixhase
kwinqanaba lehlabathi. Umzekelo, i-China isebenzise ubukho bayo e-Afrika ukwahlula ubambiswano eTaiwan. Zonke izizwe zase-Afrika, ngaphandle kwe-Eswatini, ziye zaqaphela iBeijing ngaphezulu kwe-Taipei. Iinkokheli zase-Afrika zikwavakalise ukuxhasa amabango e-Beijing kumazantsi oLwandle lwase China kwaye benza ingxelo yoluntu ukuxhasa iBeijing ngexesha loqhanqalazo e-2019 eHong Kong.
Iziphumo zeAfrika zixutywe. Ngelixa iAfrika inesidingo esikhulu sokwenza oko
Iziseko zophuhliso ezingafezekiswanga, iiprojekthi ezifumana imali eTshayina zihlala zikhethwa ngeendlela ezingafunekiyo, zisandisa iingxaki zorhwaphilizo. Ngapha koko, inkxaso-mali yase China iza ngexabiso, inegalelo kulwakhiwo olungazinzanga lwamatyala kumazwe amaninzi ase-Afrika.
Ezi ndlela zokubolekisa ngemali zikhokelele kwizityholo zekoloniyalizim entsha, kwaye emva kokudodobala kwezoqoqosho okubangelwe kukuqhambuka kwe-COVID-19, amazwe aseAfrika athe gqolo efuna ukubuyiswa kwetyala.
I-China ukuza kuthi ga ngoku ibithe cwaka kwezo zicelo, iphakamisa umbuzo wokuba ingaba
I-United States kunye nabanye abaxhasi bamazwe aphesheya bazakushiyeka betyala.
Ngelixa i-China ibhengeze iinzame zayo zempilo yoluntu e-Afrika ngexesha le
Ubhubhane we-COVID-19, uninzi lwabantu baseAfrika alunamathandabuzo kwaye bavakalise inkxalabo yokuba izixhobo ezinikelwe yi-China zisenokuba zikumgangatho ophantsi.
Ubukumkani base-Eswatini lelinye lamazwe ali-15 amkela iRiphabhlikhi yaseTshayina, ekwabizwa ngokuba yiTaiwan Lilo kuphela ilizwe e-Afrika elingenabo ubudlelwane bezopolitiko kunye neRiphabliki yaBantu base China.